November 2013 | MAUNG RUPER
Maung Ruper Android Application, Free Call & SMS No comments
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Android User များတွက် ထူးထူးခြားခြား အလန်းဇယား Application လေးတင်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ လူကြားသူကြားမှာ အရေးကြုံရင် ဖောတက်ဖိန့်တက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ဆိုပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဟဲဟဲဟဲ ..... နောက်တာပါ။ Fake Call & SMS & Call Logs လေးပါ ဘာလည်းဆိုတော့ Incoming Call တွေ Message တွေကိုအတုယောင်ဖန်တီးပြီး မိမိဆီ ၀င်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့အရမ်း အဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်နမူနာသုံးတဲ့ပုံစံလေးကို အဟာသလေးပြောပြမယ်နော်။
AVG Internet Security 2014 Beta2Serial Keys Till 2018 !! Full
Maung Ruper AVG, computer software No comments
AVG Internet Security 2014 ကနေ 2018 ထိ Serial Keys နဲ့အမြဲ တမ်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်4နှစ်စာအတွက်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Keys ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
Windows 32bit , 64bit မိမိဝင်းဒိုးနှင့်ဆိုင်ရာကို ဒေါင်းလော့စ်လုပ်ယူလိုက်ပါ။
blocks viruses, trojans, worms, spyware, and firewall to protect against network attacks
စသည်တို့အတွက် စိတ်ချရချင်ရင်တော့ AVG Internet Security Business Edition 2014 ကိုသာ
ဆွဲထားလိုက်ပါ။ ပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့...
Gmail အကောင့် free ဖွင့်ကြဦးစို့ နော်..
ကျွန်တော် ဒီနည်းလမ်းကိုConfirm ဖြစ်ဖို့
တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရသလို Confirm ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း
ရေးသင့်မရေးသင့် တော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ် .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းဟာ
သေချာပေါက် အောင်မြင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြထားတဲ့ ပုံတွေကိုက သက်သေခံနေပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့် .. ဒီနည်းက ကွန်နက်ရှင် တော်တော်ကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာလုပ်မှ
အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် .. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒီအကောင့်တစ်ခုကို ဒီနည်းနဲ့ရဖို့ အကြိမ် သုံးဆယ်ကျော် စမ်းသပ်ခဲ့ရပါတယ် ..
သဘောတရားအရ သေချာပေါက်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်မှန်းသိလျက်နဲ့ .. ဒီထဲမှာ နမူနာပြထားတဲ့ အကောင့်လေးတစ်ခုရဖို့ကို အကြိမ်သုံးဆယ်ကျော် လုပ်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ် ..
ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံတာလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီနည်းလမ်းကို ရှင်းပြနေဆဲမှာပဲ ပြောသွားပါတယ် ..
ဒါကြောင့် .. ဒီနည်းလမ်းကို စမ်းသပ်လို့ အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သုတေသနပြုညံ့ဖျင်းမှုပဲလို့ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ် ..
ကဲ .. ဒီနည်းရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို အရင်ပြောပါမယ် .. ဒီနည်းကလည်း ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ပထမနည်းတုန်းကလိုပဲ Website တစ်ခုကနေ နံပါတ်တစ်ခုသွားယူပြီး အကောင့်ဖွင့်မှာပါ .. ဒါပေမယ့် ဒီနည်းမှာတော့ အရင်နည်းလို Google ကို Fake လုပ်တာမဟုတ်ပဲ .. တစ်ကယ် နံပါတ်ကို အသုံးချပြီး အဲဒီနံပါတ်ကို google ကပို့ခဲ့တဲ့ Verification Code ကို ရိုက်ထည့်ပြီးမှ Gmail အကောင့်သစ်တစ်ခု ဖွင့်တဲ့နည်းပါ ..
ဒီနည်းမှာသုံးမယ် Message အမျိုးအစားကတော့ Voice mail ပါ .. google က ချစ်မမကြီးရဲ့ အသံကို ကြားနိုင်မယ့်နည်းပေါ့ ..
Sept 1. ဒီနေရာလေး ကနေ Sing In ၀င်လိုက်ပါ ။ Sing In ၀င်ပြီးသွားရင်
Step 2. Google Voice mail ထဲမှာ GetaVoice number (or) UPGRADE ကို နှိပ်ပါ။ ( Upgrade you account box ) ကျလာပါမည် ) ။
Step 3. I wantanew number ကို နှိပ်ပါ ။ ( Choose your number box ကျလာပါမည် ) ။
Step 4. Word , phrase , number box မှာ 123456 ကို ထည့်ပြီး ၊ Search Numbers ကိုနှိပ်ပါ ။
Searching လုပ်ပါမည်။ ခဏစောင့်ပါ ။
Step 5. Result For 123456 ဆိုပီး ဖုန်း နံပါတ် ၅ ခု ပေါ်လာပါမည် ။ အဲထဲက တစ်ခုကိုမှတ်ထားလိုက်ပါ ။
ဥပမာ ။ ။ (234) (56) 34164 ၊ ပြီးရင် Continue ကို နှိပ်ပါ ။ Reserving number ဆိုတဲ့ စာတန်းလေး ပေါ်လာပါမည် ။ ခဏစောင့်ပါ ။ ပြီးရင် Creat new PIN box ကျလာပါမည် ။
ဒီ Step တွေလုပ်နေချိန်မှာ တစ်ဖက်ကလဲ gmail account registrations လုပ်နေပါ ။ ဖုန်း နံပတ်တောင်းတဲ့ နေရာမှာ အခုန ကမှတ်ထားတဲ့ ဖုန်း နံပတ် (234 564 3416 ပေါ့) ကို ထည့်လိုက်ပီး Send Verification Code ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။ Country ကိုတော့ United State ရွေးထားရပါမည် ။ Verify Code တောင်းတဲ့နေရာကို ရောက်ရင် ၊ google voice ကိုပြန်သွားပီး add forwarding phone box ကို Cancel setup လုပ်လိုက်ပါ ။ canceling setup စာတန်းလေးပေါ်လာပါမည် ။ ပြီးရင် google voice ကိုလဲ loading ပြန်လုပ်ပါမည် ။ ခဏစောင့်ပါ ။ ပြီးရင် +14065454961 ဖုန်းနံပါတ်ကနေ Verification Code ပို့ပေးပါမည် ။
( +14065454961: You Google Verification Code is 989841 8:20 AM )
အဲဒီ Code ကို အခုနက Verification Code box မှာထည့်လိုပြီး Verify ကိုနှိပ်ပါ ။ ဒါဆို gmail account အသစ် တစ်ခုရသွားပါပြီး ။ ဒီနည်းအတိုင်း gmail account ကို ကြိုက်သလောက် လုပ်ယူလို့ရ ပါတယ် ။
( ဒါလေးတော့သိထားမှရပါမယ် ။ ။ Didn’t get your code? Sometimes it can take up to 15 minutes. If it’s been longer than that, try again. 15 မိနစ်ကျော်ရင် Gmail gmail Registrations က Expire ဖြစ်သွားပါမည် ။ )
Gmail account မှမဟုတ်ပါ ။ Gmail Disable ဖြစ်ရင် ၊ Verification Phone number တောင်းရင် လဲ ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်နိုင်ပါသည် ။ Verification phone number တောင်းတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဒီနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် ။
မှတ်ချက်။ ။ google voice မရတဲ့ အင်တာနက်လိုင်နဲ့ဆို ကျော်ခွမှ ရပါမည် ။
( UltraSurf လိုမျိုးပေါ့ မရှိသေးရင် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ )
ဒါကတော့ Gtalk account lock ဖြစ်ရင် Unlock ပြန်ဖြေတဲ Link လေးပါ ။
မရှင်းတာလေးတွေရှိရင် humannaing@gmail.com ကိုမေးနိုင်ပါတယ် https://maungruper.blogspot.com
အခုတလောမှာ တော်တော်လေးနာမည်ကြီးသွားတဲ့ Manboker v2.3.1 Apk ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ပုံကြည့်တာနဲ့တင်ဘဲ သဘောပေါက်ကြမှာပါ။ မိမိရဲ့ မျက်နှာ ကို ခဲခြစ်ကာတွန်းပုံစံလေးတစ်ခုဖန်တီးပြီး ကိုယ်ကတော့ Application မှာပါပြီးသား ရုပ်ပြောင်ခဲခြစ်ကာတွန်း ပုံလေးတွေနဲ့မိမိစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုရက်ပိုင်းလေးမှာ အရမ်းခေတ်စားနေတဲ့အ တွက် ကိုယ်တိုင်နောက်မကျအောင် ကလိကြည့်ပါဦးနော်။
App Protector ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version 5.5.0 (Full Version) ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းထဲက application တွေ , game တွေကိုကိုယ်ကလွဲပြီးတစ်ခြားသူတွေကိုပေးမသုံးစေချင်ဘူးဆိုရင် Smart App Protector ကိုအသုံးပြုပြီးမသုံးစေချင်တဲ့ application ကို password ပေးပြီး lock ချထားလို့ရပါတယ်။ ရှိထားသင့်တဲ့ application လေးပါ။ အောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ် mirrorcreator (or)zippyshare (or)d-h.st
App Protector ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version 5.5.0 (F...